Umaki: izinhlolovo zamakhasimende | Martech Zone
Umaka: izinhlolovo zamakhasimende
Uma uthathe inhlolovo muva nje, uyazi ukuthi zinokuthusa kanjani izixhumi zokuxhumana zomsebenzisi zamathuluzi wokuhlola wendabuko. Ngenye yezinkinga zokuba umholi kwezobuchwepheshe - uqhubeka nokwakha futhi uhlanganise ipulatifomu yakho futhi kuba nzima ngokwengeziwe ukuyivuselela. Ngiyaqhubeka nokukubona lokhu ngamapulatifomu ahlukile - futhi ngibonga okuhle ukuthi kwenzeke ngohlolo. I-GetFeedback ine-interface ephendulayo, ye-WYSIWYG ekuvumela
I-OpinionLab iyinkundla yokuthwebula imininingwane yamakhasimende ngocwaningo nangempendulo kuwebhusayithi yakho. I-OpinionLab iyibiza nge-Voice-Of-Customer (VOC) Data. I-OpinionLab manje inweba isethi yayo yezici ukufaka kokubili ukuhlanganiswa kokuhlolwa nokuhlolwa. Lokhu kusiza kakhulu ukuhlanganisa impendulo yezivakashi zakho nemisebenzi yazo yesayithi. Ngezindleko zokuthola ikhasimende elisha izikhathi eziphindwe kasithupha kuya kweziyisikhombisa zokuligcina selikhona, kubalulekile ukuthi imikhiqizo ingene kokufakwayo